Abenzi be-Slicker Brush & Abahlinzeki | I-China Slicker Brush Factory
Ibhulashi Elincane Elihoxiswayo Lenja
1. Shayela ngobumnene izinwele ohlangothini lokukhula kwezinwele. Ama-bristles asusa izinwele ezikhululekile, aqede amathanga, amafindo, i-dander nokungcola okuvalelekile.
2. Izikhonkwane ezibuyisekayo zikongela isikhathi esibalulekile sokuhlanza. Lapho iphedi ligcwele, ungakhipha izinwele ngokucindezela inkinobho engemuva kwephedi.
3. Ibhulashi le-slicker elikhulu elihoxiswayo ngesibambo sokuthamba esithambile, mane ucindezele inkinobho engaphezulu kwebhulashi ukukhipha i-hair.it ngokuqinisekile kuzosiza ukwenza okuhlangenwe nakho kokunethezeka nokunethezeka kwenja yakho.
Inja Yokuzilungisa Izinja
I-1.Dog brush slicker brush inekhanda leplastiki eliqinile elinezikhonkwane zensimbi ezingenasici ezisezingeni eliphakeme, lingangena lingene shi ekujuleni ukuze lisuse ijazi elixegayo.
Ukuzilungisa izinja ngezinja kususa kahle izinwele ezikhululekile, kuqeda izigaxa, amafindo, ukudonsa nokungcola okuvaleleke ngaphakathi kwemilenze, umsila, ikhanda nenye indawo ebucayi ngaphandle kokunwaya isikhumba sesilwane sakho.
3.Lebhulashi lokulungisa inja lingasetshenziselwa nezilwane ezifuywayo ezomileyo ezinesikhumba esibucayi namabhantshi aluhlaza.
Ukwanda kokujikeleza kwegazi futhi kushiya izifuyo zakho zithambile futhi ziyacwebezela. Ukwenza ukuxubha isilwane sakho kube yinto ethokomele futhi emnandi.
I-5.Ergonomic design grip inikeza induduzo lapho uxubha noma ngabe ukama isikhathi esingakanani, kwenza ukuzilungisa kube lula.
I-Double Sided Flexible Pet Slicker Brush
I-1.Pet Slicker Brush yenza umsebenzi omuhle wokususa izinwele ezincibilikisiwe, ikakhulukazi ngemuva kwezindlebe.
Ibuye iguquguquke, okwenza ukuthi ikhululeke kakhulu inja.
I-3.Double emaceleni eguqukayo yesilayidi esisheshayo idonsa izinwele kancane kakhulu, ngakho-ke ukubhikisha okujwayelekile kwezinja kuye kwasuswa kakhulu.
I-4.Lebhulashi liyaqhubeka lize liye phansi ngezinwele ukusiza ukuvimbela ukumila.
I-1.Lebhu yokuhlanza eyenzelwe wena izinja yenziwe ngensimbi engagqwali, ngakho-ke ihlala isikhathi eside.
I-2.I-wire bristles enhle egobile kubhulashi lethu le-slicker lenzelwe ukungena ekujuleni kwesilwane sakho ngaphandle kokunwaya isikhumba sesilwane sakho.
I-brush yokuzihlanza eyedwa yezinja izoshiya isilwane sakho ngejazi elithambile nelicwebezelayo ngemuva kokulisebenzisa ngenkathi ulimasa futhi uthuthukisa ukujikeleza kwegazi.
4.Ngokusetshenziswa okuvamile, le bhulashi lokuzihlanza lizonciphisa ukuchitheka esilwaneni sakho kalula.
I-Self Cleaning Pet Slicker Brush
I-Wood Dog Cat Slicker Ibhulashi
1.Lebhulashi lezinja zezinkuni lisusa kalula amacansi, amafindo nemisindo engutsheni yenja yakho.
Leli bhulashi libhulashi le-beech elenziwe kahle elenziwe ngezandla elenziwe ikwenzele wonke umsebenzi futhi linikeza ukucindezeleka okuncane komkhwenyana nesilwane.
3.Lamabhulashi ezinja ezishubile anama-bristles asebenza ku-angle ethize ukuze angaklwebhi isikhumba senja yakho.Lebhulashi lezinkuni lekati elishisayo lenza izilwane zakho ezifuywayo zilungiswe futhi ziphathwe ngendlela yokuthambisa.